Ahoana ny fampiasana amin'ny efitrano | Ota Citizen's Plaza
Efitrano fivoriana 1.2.3.4
Efitra fomba Japoney voalohany
Efitra dite, efitrano kanto
Studio mozika voalohany
Fomba loteria Mandraisa anjara amin'ny loteria ao amin'ny Hall Small Hall an'ny Ota Citizen.
Fomba fampiharana fotoana Ny fandraisana dia ekena ao amin'ny efitrano kely Ota Ward Plaza manomboka amin'ny 13:20 ka hatramin'ny 14:00 amin'ny andro anaovana ny loteria.
(Manomboka amin'ny 14:00 ny loteria) Ny fandraisana dia ekena ao amin'ny efitrano kely Ota Ward Plaza manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 10:00 amin'ny andro anaovana ny loteria.
(Manomboka amin'ny 10:00 ny loteria) Manomboka amin'ny faha-4 ka hatramin'ny faran'ny volana, efa-bolana alohan'ny volana fampiasana, dia miangavy ao amin'ny Uguisu Net, Ota Ward Plaza, na ny varavarankely fampiasa ao amin'ny Ota Ward.
· Fe-potoana fe-potoana Manomboka amin'ny daty amin'ny loteria ka hatramin'ny faha-20-n'io volana io ihany
· Fotoana fandraisana Daejeon Citizen's Plaza
(Tsy manakaiky ny andro mihidy) Plaza Ota Citizen's
(Tsy manakaiky ny andro mihidy)
· Isan-trano ao amin'ny paroasy
· Fe-potoana fe-potoana Aloavy amin'ny fotoana fangatahana.
Raha mangataka amin'ny Uguisu Net ianao dia miangavy anao handoa ao anatin'ny 14 andro aorian'ny datin'ny fangatahana.
Raha nanao fangatahana teo amin'ny kaontera ianao dia andoavanao vola amin'ny fotoana fisoratana anarana.